Fandotoana ny rivotra manerantany: Real-time Air Quality Index
Azafady miandry rehefa mandefa ny angona avy amin'ny Air Quality
Tsy mahasalama ho an'ny vondrona marefo
Tena tsy mahasalama
Ny vohikala dia omena anao amin'ny tetikasa World Air Quality Index
Ny sarintany etsy ambony dia maneho ny kalitaon'ny rivotra iainana amin'ny alàlan'ny seranana maherin'ny 10.000 eto amin'izao tontolo izao.
Tsy mahita ny tanànanao amin'ny sari-tany?
Te hahafantatra ny toby fanaraha-maso kalitao avy amin'ny rivotra?
Ny tobin'ny fitsikilovana kalitaon'ny GAIA dia mampiasa lasantsy laser-n'ny teknolojia avo lenta mba handrefesana ny fandotoana PM2.5 amin'ny fotoana mety, izay iray amin'ireo lozam-pifamoivoizana mampidi-doza indrindra.
Tena mora ny mametraka azy ireo, dia mitaky adiresy WIFI fotsiny izy ireo ary manome angovo USB. Vantany vao tafiditra dia voamarina avy hatrany ny fandotoana ny rivotra iainana sy amin'ny fotoana mety amin'ny sarintany
Mitadiava toerana ipetrahan'ny fakan-tsarimihetsika GAIA ankehitriny!
Momba ny tetikasa World Quality Index Index
Ahoana ny fampiasana an'io fampiharana io
Raha te hahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny tanàna iray manokana, afindrao ny hetsika amin'ny sainam-pirenena eo amin'ny sarintany etsy ambony, ary tsindrio ny hahazoana ny vaovao momba ny fahalotoan'ny rivotra.
tsara Tsy mahasalama ho an'ny vondrona marefo Tena tsy mahasalama
antonony Unhealthy mampidi-doza
Ny Index de l'Homme de l'Air dia mifototra amin'ny fandrefesana ny zavatra simika (PM2.5 sy PM10), Ozon (O3), gazy nitroka (NO2), solika (SO2) ary CO2 emission. Ny ankamaroan'ny onjam-peo eo amin'ny sarintany dia manara-maso ny angona PM2.5 sy PM10, saingy misy afa-tsy vitsy monja no misy PM10.
Ny fandrefesana rehetra dia mifototra amin'ny famakiana isan'ora: ohatra, ny AQI dia nitatitra tamin'ny 8AM dia midika izany fa vita ny 7AM hatramin'ny 8AM.
Fampahalalana sy rohy fanampiny
Te hiaro tena amin'ny rivotra iainana ve ianao?
Jereo ny pejin-tsika sy ny fanadiovana ny làlanay.
Te hahalala bebe kokoa ny rivotra iainana?
Jereo ny pejin-dresaka matetika (FAQ).
Te-hahita ny fiovan'ny rivotra iainana Air Pollution?
Hamarino ny takelaka momba ny Forecast.
Te hahafantatra bebe kokoa momba ny tetikasa sy ny ekipa?
Jereo ny pejin'ny contact.
Te-hiditra amin'ny angona avy amin'ny Air Quality amin'ny API?
Jereo ny pejy API.
Te-hanangona toby fanaraha-maso Air Quality?
Jereo ny pejy Fanaraha-maso Monitoring.
Do you speak Malagasy?
Mila ny fanampianareo handika ity tranokala ity izahay.
Ny haavon'ny AQI ampiasaina amin'ny fanasokajiana ny loto eo amin'ny sarintany etsy ambony dia mifototra amin'ny fenitry ny EPA Amerikana farany, amin'ny fampiasana ny formula of reporting Instant Cast.
IQA Health Implications Cautionary Statement
0 - 50 tsara Ny hatsaran-drivotra dia heverina ho mahafa-po, ary ny tsy fahampian'ny rivotry ny rivotra dia tsy atahorana tsy misy
50 - 100 antonony Ny kalitaon'ny rivotra dia azo ekena; Na dia izany aza, ho an'ny fahasalamana vitsivitsy dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamana miadana ho an'ny olona vitsy dia vitsy no mahatsapa ny fahalotoan'ny rivotra. Ny ankizy sy ny olon-dehibe mavitrika ary ny olona manana aretina amin'ny taovam-pisefoana, toy ny asmma, dia tokony hametra ny ezaka maharitra eo amin'ny ivelany.
100 - 150 Tsy mahasalama ho an'ny vondrona marefo Ny mpikambana ao amin'ny vondrona mahatsapa dia mety hiaina ny fahasalamana. Tsy dia misy fiantraikany eo amin'ny vahoaka ny vahoaka. Ny ankizy sy ny olon-dehibe mavitrika ary ny olona manana aretina amin'ny taovam-pisefoana, toy ny asmma, dia tokony hametra ny ezaka maharitra eo amin'ny ivelany.
150 - 200 Unhealthy Mety manomboka mihatsara ny fahasalamana ny tsirairay; Ny mpikambana ao amin'ny vondrona mahatsapa dia mety hiteraka fahasamihafana ara-pahasalamana lehibe kokoa Ireo ankizy mavitrika sy olon-dehibe, ary ireo olona manana aretina amin'ny taovam-pisefoana, toy ny asmma, dia tokony hisorohana ny ezaka maharitra eo amin'ny ivelany; Ny olon-drehetra, indrindra fa ny ankizy, dia tokony hametra ny ezaka maharitra eo amin'ny ivelany
200 - 300 Tena tsy mahasalama Fampitandremana ara-pahasalamana momba ny fepetra amin'ny vonjy taitra Ny mponina rehetra dia mety ho voakasika kokoa. Ireo ankizy mavitrika sy olon-dehibe, ary ireo olona manana aretina amin'ny areti-mifindra, toy ny asmma, dia tokony hisoroka ny fampiasana ivelany rehetra; Ny olon-drehetra, indrindra fa ny ankizy, dia tokony hametra ny fampiasana ivelany.
300 - 500 mampidi-doza Fahatokisana ara-pahasalamana: mety hisy vokany mahatsiravina ny tsirairay Ny tsirairay dia tokony hisoroka ny fampiasana ivelany
Ireo fanomezan-dàlana rehetra dia tsy maintsy mandeha any amin'ny masoivoho mpiaro ny tontolo iainana manerantany, satria ny asa rehetra dia azo tanterahina noho ny asany. Jereo ny pejy lisitry ny lisitry ny EPA manerantany.
Tanàna misy ny rivotra maloto indrindra amin'izao fotoana izao
Top 10 firenena miaraka amin'ny mari-pandrefesana fanodinkodinan'ny rivotra
Fampiharana momba ny fampiasana
Ny angon-drakitra rehetra momba ny Air Quality rehetra dia tsy misy valiny amin'ny fotoana famoahana, ary noho ny fanomezan-toky kalitao, azo averina amin'ny alàlan'ny filazam-potoana ireo angona ireo. Ny tetikasa World Air Quality Index dia nampihatra ny fahaiza-manaony sy ny fikarakarana rehetra amin'ny fanangonana ny votoatin'ity fampahalalana ity ary raha tsy misy ny toe-javatra dia ny ekipan'ny tetikasa World Air Quality Index na ny mpanafika azy dia mety hilefitra amin'ny fifanarahana, ny fanolanana na ny tsy fahampian'ny fahaverezana, ny fahasimbana na ny fahavoazana. mitombo mivantana na tsy mivantana amin'ny famatsiana ireo angona ireo.